Ahoana no fomba hifehezana ny lisitry ny laharana Amazon?
Amazon dia vavahadin-tserasera e-varotra lehibe eran-tany. Isan'andro dia olona an-tapitrisany no mividy ao amin'io sehatra io, mampitombo ny fidiram-bolan'ny mpivarotra sy ny tombom-barony Amazona. Ny fampiakarana ny varotra Amazon anao amin'ny lisitry ny valin'ny fikarohana dia mety hampitombo ny fahitana marika anao ary hampitombo ny fidiram-bola - σετ εσωρουχα med. Angamba ny fomba tsara indrindra hanatsarana ny fivarotana varotra dia ny vokatra faran'izay tsara indrindra amin'ny vidiny amin'ny vidiny mety. Ankoatra izany, ny vokatrao dia tokony ho eo foana. Ny fikajiana hafa tahaka ny fisainan'ny mpiseraseran'ny fikarohana, ny fandefasana haingana, ary ny fanomezana dia tsy miankina afa-tsy aminao. Ireo fototry ireo dia ho toy ny fomba mahazatra indrindra ho an'ny fanatrehanao an'i Amazon.
Na izany aza, misy ny soso-kevitra sasantsasany tokony ho fantatrao, ivelan'ny sehatry ny merchandising voalohany. Hodinihina ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba tokony hiezahanao hanatsarana ny tetikadinao amin'ny fananganana ny varotra.
te-hampitombo ny varotrao amin'ny Amazon, ny vahaolana tonga lafatra dia ny hampiasa loharanom-baovao fanampiny toy ny vondrom-piarahamonina. Betsaka ny sehatra fifanakalozan-kevitra ao amin'ny sehatry ny forum ho an'ny mpivarotra amoron-dranomasina Amazon izay manombana ny fifanarahana ary manome torohevitra amin'ny hafa ny toerana sy ny fotoana ahafahany manao fifanarahana. Ireo mpikambana ao amin'ny fiaraha-monina dia tsara indrindra amin'ny fitadiavana ny zavatra tsara indrindra ho an'ny vidiny mety. Ireo tovolahy ireo dia hahita ny fahadisoana amin'ny vidiny, ny fampiroboroboana ary ny fahafahana rehetra. Aza manary ny fahafahanao mividy bebe kokoa ary manjary mpikambana ao anatin'ny iray amin'ireo vondrom-piarahamonina malaza. Ataovy azo antoka fa manan-danja ny fihenan-dalanao mba ahafahan'ireo mpivarotra mandray azy ireo. Raha manana ny kalitao avo lenta ny vokatrao ary manana vidiny tsara, dia ho afaka hitazona haingana sy haingam-pivarotana haingana.
Hikaroka vokarin'ny vokatra
Efa voamarikao angamba fa ny vokatra vokarin'ny fivarotana dia mamaritra foana ny vokatra ao amin'ny TOP Amazon. Azo hazavaina amin'ny tanjona ambaran'ny Amazon mba hampitombo ny fidiram-bola. Noho izany, tsara kokoa ny vokatra azonao mivarotra, ny avo indrindra hita ao amin'ny valin'ny fikarohana, izay mitarika ho amin'ny fivarotana bebe kokoa. Araka ny voalazan'ny algorithm omen'ny algorithm, ny isam-pamokarana tsirairay amin'ny valin'ny fikarohana dia isam-bolana. Noho izany, na dia avo toerana ao anatin'ny sokajinao aza ny lisitra, tsy midika izany fa hapetraka ao amin'ny TOP OF AMAZALA amin'ny fikarohana ireo teny mifandraika amin'izany.
Mba hanovana ity toe-javatra ity sy ny fiantraikany amin'ny ambaratonga amidinao Amazon amin'ny lisitry ny valin'ny fikarohana, mila mampiasa fomba mahomby hamandrihana ny varotra fivarotana ianao. Andeha isika hiresaka momba ny sasany amin'izy ireo.
Ny lafiny manan-danja amin'ny fanentanana fanentanana Amazon dia fikarohana lalindalina kokoa. Mila mitady teny manan-danja sy be dia be ianao, raha ny mpivarotra no ampiasaina mba hahita ny vokatrao. Azonao atao ny mahazo an'io data io amin'ny alàlan'ny programa Amazon Sales Central na Amazon Retail Analytics. Ankoatra izany, azo atao ny mampiasa ny Google Trends amin'ny angon-drakitra amin'ny tranonkala ho toy ny proxy malemy raha ilaina izany. Raha vantany vao nanao lisitry ny teny fikarohana ianao, mila mikaroka momba ny Amazôna ianao noho ny fepetra avoakanao. Tadiavo ny vokatrao amin'ny pejy valin'ny fikarohana, tsindrio ny pejy antsipiriany ary hividy izany. Ataovy izany hatrany hatrany mandra-pahitanao ireo fanatsarana voalohany. Ny vokatr'io paikady io dia miankina amin'ny anton-javatra marobe toy ny rafitry ny fandaniana vokatra, fifanarahana fifanarahana amin'ny Amazon. sns.
Vous et 365 autres personnes aimez 365 personnes aiment. Azo atao toy ny fitaovana fampiroboroboana ilaina amin'ny antony maromaro izany. Ny Coupon Power Vendor dia malaza amin'ny mpanjifa. Izany no mahatonga azy ireo hanana fiantraikany tsara eo amin'ny fampiroboroboana ny marika sy ny varotra. Azonao atao ny manatrika azy ireo ao amin'ny Box Gold na ny fivarotana varotra. Vitsy ny vola tapakila mba hahafahanao manatsara ny fampiratiana ny marika na dia haingana aza ny fivarotana velarana.
Mora ampiasaina sy mitantana azy ireo izany satria azonao atao ny mamorona tapakilam-pahefana amin'ny mpivarotra amin'ny foiben'ny mpivarotra.Ankoatra izany, afaka manana fifehezana feno amin'ny teti-bola ianao. Miala ireo tapakila raha vantany vao reraka ny tetibola. Ny tombony iray hafa dia ny fangataham-bolan'ny mpivarotra tsy mila fampiasam-bola manan-danja. Azonao atao ny mamatsy ny fihenam-bidy ary mando ny saram-panafahana.
Mba hampitombo ny varotrao sy hanatsarana ny varotra vokatra vokatra amin'ny lisitry ny fikarohana Amazon, ianao dia afaka manangana ny tambajotra. Ny fifandraisanao bebe kokoa, ny ambony kokoa no hizaranao amin'ny fikarohana Amazon. Noho izany, afaka manangona fivarotana varotra ianao amin'ny fanamafisana ny varotra manontolo. Voalohany indrindra, afaka mampanao namana sy havana ianao mba hividy ny zavatrao. Afaka mandany vola ihany koa ianao amin'ireo zavatra ireo ary manolotra azy ireo fotsiny ho an'ny olona. Raha manao izany ianao dia hahazo ilay baolina mihodina.
Media sy media sosialy
Ny sehatra media sosialy dia mety ho loharanom-pitaovana fanampiny ho an'ny vokatra Amazon. Izany no mahatonga ny kaontinao amin'ny sehatra sosialy malaza toy ny Facebook, Instagram, Twitter, ary Pinterest. Ireo pejy ireo dia tokony hampiseho ny vokatrao ary hampiasa ny mpampiasa amin'ny fividianana azy ireo. Ataovy azo antoka fa mametraka rohy mankany amin'ny lisitry Amazon ianao ao amin'ny lohatenin'ny pejy. Mila manavao tsy tapaka ny fampahalalana ao amin'ny kaontinao amin'ny fampahalalam-baovao ianao mba hanohanana ny asan'ny mpanaraka.
Azo eritreretina ny mamorona blaogy mahazatra ny vokatrao. Ataovy manam-pahaizana manokana ianao amin'ny famoronana endritsoratra mifantoka amin'ny fikarohana sy fikarohana. Azonao atao koa ny mametraka ny fanehoan-kevitrao amin'ny blôgy hafa na fifanakalozan-kevitra ifanakalozan-kevitra. Ny fomba mahomby hanatsarana ny fanentanana ny marika dia ny fandefasana hafatra. Mba hamonjena ny fotoanao amin'ny fandefasana ny bilaogy manokana sy ny fampiroboroboana, dia afaka miara-miasa amin'ny mpanafika ianao ao anatinao.
Fomba iray manintona kokoa hanitarana ny mombamomba ny marika ao amin'ny tranonkala dia ny hamoahanao dokam-barotra amin'ny vokatra Amazon anao. Azonao atao ny manangana gazety na lahatsoratra ary mandefa azy ireo any amin'ireo orinasam-baovao ao amin'ny tsenanao. Raha manana fifandraisana sasantsasany amin'ireo fantsom-pitenenan'ny media, toy ny TV, ny gazety, sns. , azonao atao ny mangataka azy ireo haneho ny vokatrao. Raha tsy izany, afaka mandoa vola amin'ny dokam-barotra vokarinao amin'ny haino aman-jery an-tserasera ianao miaraka amin'ny rohy mankany amin'ny pejy Amazon anao.